musha UNITED UMAMBO FOOTBALL STORI Vatambi Vanotamba Yevatambi Tyrone Mings Yevacheche Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius inonyatsozivikanwa nezita rokuti "Kudzvinyirira". Yedu Tyrone Mings Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yezvinoitika zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hupenyu uye Rise yeTirone Mings. Image Chikwereti: DailyMail, iTV, TbrFootball uye eadt
Ehe, vateveri vazhinji vakamuziva munguva yake yekutanga kuenda kuEngland, mutambo wekutanga uyo wainzi wakazadzwa nemadzinza evatambi kubva kuvaimbi veBulgaria. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveTrone Mings biography iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
Tyrone Mings Yevacheche Nyaya yeNhau uye Untold Biography Chokwadi - Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Tyrone Deon Mings akaberekwa pazuva re13th raKurume 1993 kuna amai vake, Dawn Johnson uye baba, Adrian AKA Adie Mings muguta reBhati, United Kingdom. Iye akazvarwa ari iye ega mwanakomana kubva kuvanasikana vatatu kuvabereki vake vakanaka vanobva kwakasiyana marudzi.
Sangana naTrone Mings Vabereki - Dawn Johnson naAdie Mings. Image Chikwereti: Twitter
Tyrone Mings ane mhuri yake kubva kuBarbados kuburikidza nerutivi rwake rwababa. Sezvinoonekwa pazasi, ino inzvimbo yechitsuwa iri munharaunda yeCaribbean yeNorth America. Waizviziva here? Iyo inzvimbo yekuzvarwa yemuimbi ane mukurumbira Rihanna. Szvimbo yakapfuma yeshuga, nyika yakava nzvimbo yeChirungu yekutengeserana kwevaranda vemuAfrica kutenderera 1807. Izvi zvinoreva kuti vanenge vese-vatema vagari vekuBarbados kusanganisira vanasekuru vaTirone Mings vane maAfrica midzi.
Tyrone Mings Mhuri yemhuri yakatsanangura. Mufananidzo Wemifananidzo: WorldAtlas
Tyron Mings aive nehupenyu hwakaoma achiri mudiki paakakura padivi paamai vake uye vatatu hanzvadzi. Paaive mukomana mudiki, akaona kusapindirana kwehukama pakati paamai vake nababa vake pavakazoparadzana, mushure maizvozvo mai vake vakamutora pamwe nehanzvadzi dzake. Pakutanga, ivo vakaenda kunogara neshamwari yepedyo yemurume wake muChippenham (Town in England) sezvo pakanga pasina imwe nzira. Rimwe zuva, vese mai Mings, mai vake pamwe nehanzvadzi nekuda kwekusagadzikana kwavakakonzera, vakafunga kubva panzvimbo iyi, vasina imwe nzvimbo yekuenda uye vasina mari yekutora imwe imba.
Paaitsanangudza yake yemurombo yemhuri uye nezvekwaakakurira kuna teregirafu, akadaro hupenyu hwakatenderwa pasi pavakatarisana vakatarisana neimwe sarudzo kwete yekugara musina pekugara. Pavaive pekugara, Mings, mai vake Dawn uye vatatu hanzvadzi vese vakagovana miviri yemubhedha.
Munguva yehupenyu hwake hwepwere, Tyrone Mings, vanamai vake nehanzvadzi dzake vese vaigara mune yekugara isina pekugara. Chikwereti: VoiceofOC & Daily Mail
Haasi munhu wese pahugaro hwaive hwakanaka kwavari. Ivo vaviri amai, mwanakomana nevanasikana vairarama hupenyu hwaityisa sezvo zvinhu zvese zvaigovaniswa pachena Ipa zita…; nzvimbo yekugezesa, zvimbudzi, nguva yemvura, nezvimwewo
Tyrone Mings Yevacheche Nyaya yeNhau uye Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Ndichiri kugara mushe isina pekugara, Mings akanzwa shungu dzekuenda kuchikoro kuitira kuti aite chimwe chinhu muhupenyu hwake. Kure nechikoro, nhabvu yakava ruponeso rwake uye ndiyo chete tsime rekunyaradza kure nezvinhu zvakashata.
Tyrone Mings Dzidzo yakasanganiswa nebhola. Chikwereti kuHPR uye DailyMail.
Kuve nani pane vamwe vese vari mumutambo, Tyrone Mings aiziva kuti iye ane tarenda uye anogona kuita chimwe chinhu kunze kwehupenyu hwake nebhola. Kufunga nezvekuoma kwaakatarisana nako panguva iyoyo, zvese zvaaida yaive kushandisa nhabvu kuti akwidzirise kumhuri yake yepamoyo.
Kuti awane kutanga kwakanaka kwebasa, akatanga kuzviisa kakawanda mumakirabhu ebhola emuno, achidzidzira bhizinesi rake rebhora seanoremedza Kare ikako achitamba nhabvu, vatambi vaiziva nyaya yemhuri yaTirone Mings nenzvimbo yekugara isina munhu vakamuratidza ruremekedzo + nekurudziro sezvo vaisambofungira kuti ari kuenda munzira kwayo.
Tyrone Mings Yevacheche Nyaya yeNhau uye Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Kuzvishingisa kwamai vake nehanzvadzi dzake hakuna akaziva miganhu apo bahati Mings kuburikidza nekushanda nesimba uye dhizaini yakadaidzwa kuenda kumitambo yenhabvu neSouthampton academy. Pazera regumi nemasere (gore 2001), Mings akanyoreswa muchikoro mushure mekupfuura miedzo ine mavara anobhururuka.
Tyrone Mings Upenyu hwepakutanga neBhora- Mazuva ake kuSouthampton Academy. Image Chikwereti: DailyMail
Pakubatana, zvainakidza kune wechidiki mutete. Asi mudiki Tyrone Mings aifanira kuzvipira kwakawanda kuti akure kuburikidza neyepamusoro academy. Kuve mune imwe yepamusoro yezvikoro muEngland, imwe yakaunza matareji epasi rose- izvo zvaifarira Alan Shearer, Gareth Bale etc, kwaive nemakwikwi makuru enzvimbo uye nekutyisidzira kweanoputika.
Iro 2009 raive zvechokwadi rakasuruvarisa gore kumhuri yeTrone Mings. Mudziviriri anovimbisa akasunungurwa neVatendi mu2009 (zera 15) apo iyo academy yaizviti ndizvo zvakakonzerwa nebhajeti rayo yevechidiki ichizunzwa.
Tyrone Mings akawira pasi kwete chete nekuda kweanonzi 'bhajeti yakatemwa'asi zvakare nekuti kirabhu yakamupomera kuti aive akanyanya ganda kana kurema. Vashoma vaiziva kuti vaiita chikanganiso chakakura kuburitsa ramangwana 6 tsoka 5 inches (Tyrone Mings kureba) hulking chimiro uye zvakare ramangwana England yepasi rose mutambi.
Tyrone Mings Yevacheche Nyaya yeNhau uye Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira
Chero chero munhabvu akasimudzwa kubva kumhuri isina kusimba yemhuri uye akararama kuburikidza nekurambwa nebhola rechikoro achanyatso ziva kurwadziwa kwakadzama kwemweya uye kukuvara kwepfungwa kunogona kuve nako. Nekuvimba zvishoma kana kusavimbika kwemutambo, murombo Tyrone Mills akafunga kurega bhora paakanga ari 15. Zvinosuruvarisa kwazvo !!
Tyrone Mings akaenderera mberi achitsvaga basa kuChippenham, guta hombe remusika musika kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweWiltshire, England. Basa rake rekutanga raive pub (imba yekutandarira) kwaakadhira pints (akashandira doro) pamari ye- 45-pa- vhiki. Mukuda kuwedzera mari yake kuitira kuti abhadhare zvikwereti, Tyrone akasarudza kuenda kunotsvaga basa kumwe kunhu.
IWhite Hart pub kuChippenham uko Mings akadhonzera pints. Image Chikwereti: EuroSports uye Zuva
Mings akazowana imba yekupa zano yekupa zano (mupi wezano wekupa), basa rakakwana kubhadhara mabhiri ake. Achiri kushanda, akapinda Chikoro cheMillfield muSomerset kwemakore maviri. Chikoro mushure mekunzwa nyaya yake yemwoyo-yekurambwa yaive nemutsa zvekuti yakamupa kudzidza bhora, iro rakaita kuti Mings adzore pfungwa uye adzokere munhabvu.
Tyrone Mings Yevacheche Nyaya yeNhau uye Untold Biography Chokwadi - Kukwira Kumukurumbira
Akasiya chikoro, Mings kudzidza akasvitsa kwaari asiri-ligi mudivi reYate Town muGloucestershire. Ikoko, mukomana murombo akatanga kurwira nzira yake kumusoro. Muzhizha re2012, akasimuka sezvaaigamuchira nechikwata chetaundi rekumusha kwake Chippenham Town. Iyo kirabhu yakamupa mukana wekuenda kumayedzo akati wandei kune imwe nzvimbo sezvo anga abuda mu timu achitenda nehunhu hwake.
Tyrone Mings akapihwa nhabvu nhabvu inomubatsira kuti adzoke munhabvu. Image Chikwereti: Zuva
Mushure mekukundikana miedzo kuCardiff City, Swindon Town, Portsmouth uye Bristol Rovers, Mings aine mweya isingambofi-yakataura yakabata pfungwa yeaimbova mutambi weIpswich Russell Osman uyo akasarudza kumubatsira. Sezvineiwo mukana waungave nawo, Osman akakurudzira Mings kuna Ipswich Town mukuru Mick McCarthy uyo akamukoka kuzotongwa.
Panzvimbo pekudonha muIpswich dhorobha, mutambi wekudzivirira akakurira kubva kune simba kune simba, achifamba kubva padyo-zero kuenda kune gamba risina kujeka uye kudzorera back sahwira wake (destiny mubatsiri) nezviratidzo zvake zvakanaka.
Tyrone Mings akakura kubva pasimba pasimba kusvika pakuratidzira mukuru wake. Image Chikwereti: Zuva
Kutanga kwekubudirira kwake kwakauya paakabata Makwikwi eChikwata cheMwedzi Mwedzi mumwaka we2014 / 2015. Izvi zvakakwezva makirabhu ePremier League akakumbira pamabvi avo kusaina kwake.
Pa 26 June 2015, Mings akasaina yeAFC Bournemouth. Kuti arege kukwikwidza nzvimbo, akabvuma chikwereti chekuenda kuAston Villa. Iyi sarudzo yakaona shanduko huru mune rake basa. KuVilla, gigantic 6-tsoka-5 mudziviriri akatsungirira kukwikwidza kusimuka. Akava mumwe wevamwe nyeredzi varume avo yakabatsira Villa mukukunda iyo 2019 EFL Championship play-offs.
Tyrone Mings akave fanika waaida sezvo akabatsira Villa kuchengetedza iyo 2019 EFL Championship kutamba-offs. Chifananidzo Chemifananidzo: Twitter
Mushure mekubatsira Aston Villa kukwidziridzwa, Mings anove akasimba fanika yavanofarira. Pasina nguva, akazova imwe inopisa zvinodzivirira nzvimbo muEngland. Kusimuka kwakadaro kwakamuwanira nzvimbo kuchikwata cheEngland. Izvo zvakamuwanirawo chikwereti chechizvarwa chenyika yeChirungu icho chakafukidzirwa nemadzinza evatambi kubva kuvateveri veBulgaria.
Tarira, mukomana mudiki aimbogara pekugara pasisina pekugara, ava kutumbuka pamberi pemeso evatambi venhabvu. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Tyrone Mings Yevacheche Nyaya yeNhau uye Untold Biography Chokwadi - Ukama Hupenyu
Nekusimuka kwake mukurumbira uye kuita kuti England yake ibude, zvine chokwadi chekuti vateveri venhabvu vazhinji vanofanira kunge vakabvunza kuti Tyrone Mings musikana angave ani. Iko hakuna kuramba chokwadi chekuti mukurumbira wake, kutaridzika kwakanaka pamwe chete neiyo 6 ft 5 kukwirira kwaisazomuita asingakendengi kune vakadzi.
Ndiani Tirone Mings Musikana musikana
Nekudaro, kumashure kweanobudirira nhabvu, kune musikana akanaka kwazvo uyo anove mashoma anozivikanwa nezvake. Chokwadi ndeche- Panguva yekunyora, zvingave zvakavanzika zvido zveTrone Mings ndoimwe inopukunyuka kuongororwa kwemaziso eruzhinji nekuda kwekuti hupenyu hwake hwerudo hwakavanzika uye hungangoita mutambo-wakasununguka.
Tyrone Mings Yevacheche Nyaya yeNhau uye Untold Biography Chokwadi - Upenyu hwehupenyu
Kuziva Tyrone Mings Hupenyu hwepamoyo kure nemabasa ake pamunda kunobatsira iwe kuwana mufananidzo uri nani wehunhu hwake.
Kutanga kubva, Mings munhu akaoma uyo ane hukama uye anowanzo kurota mukutsvaga kwake ukuru. Kure nenhabvu, anowanzopedza nguva yakawanda ari panzvimbo yekumhanyisa kuvaka mhasuru yake uye yakaoma muviri. Kunze kwebhola, Mings anozviona iye sebhizinesi. Waizviziva here? Iye ane yemukati dhizaini kambani muBournemouth.
Kunzwisisa Tyrone Mings 'hunhu kubva pagomba. Chikwereti kuna IG
Zvakare paTyron Mings Hupenyu hweMunhu, munhu asina hanya zvakanyanya uye anoda kubatsira vamwe asingatarisiri kuwana chero chinhu kudzoka. Nepo vanhu vazhinji vachinakidzwa nezuva reKisimusi nemhuri dzavo. Tyrone Mings nemusikana wake vanopa nguva yavo kune vashoma mukana kune dzimba dzekugara, vachimhanyisa chikafu nezvakakosha.
Tyrone Mings inodzosa kufarira nekushanyira & kubatsira vanhu vanogara kunzvimbo isina pekugara. Chikwereti: Ipswich nyeredzi
Pasina kupokana, Tyrone Mings Hupenyu hwega hunoratidzwa netsitsi uye hwakaratidza kugona kwemanzwiro.
Tyrone Mings Yevacheche Nyaya yeNhau uye Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri
Iyo Tyrone Mings nyaya yemhuri yakadzidzisa vanhu vazhinji vari kunetsekana, asi vachishuva kuwana hukuru izvo 'nzira yakanakisa yekusava netariro ndeyekumuka uite chimwe chinhu'. Senge panguva yekunyora, Tyron Mings akagadzirira mhuri yake yapfuura kusvika kurusununguko rwemari, zvese nekuda kwebhola. Iye zvino, ngatipei imwe nzwisiso munhengo dzemhuri yake.
Kuziva zvakawanda nezve Tyrone Mings Baba: Nhabvu mumhuri haina kumbotanga neTrone. Waizviziva here? Ivo baba vake Adie Mings aimbova murwi pamwe neasina ligi Bath City uye Gloucester City. Mwoyo wakakanganwirwa waTyron Mings wakabatsira kubatanidza vese baba nemwanakomana. Waizviziva here? Ivo vaviri baba nemwanakomana vachiri kuita mutsara wakafanana wekutengeserana. Adie Mings sepane nguva yekunyora anoshanda se scout yeChelsea Football Club.
Tyrone Mings inobvira nababa vake- Adie Mings. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram
Kuziva zvakawanda nezveTyron Mings Amai: Dawn Johnson bagan akatakura zita rababa vake mushure mekuparadzaniswa nemurume wake makore mashoma mushure mekunge vasangana. Mambakwedza, amai vakasimba havataurire Mwanakomana wavo, kuti vasashaye simba kuitira kuti mapere ekuomerwa amuwane. Iye pachinzvimbo, akamubata ndokumutsigira panguva yake yose yekuda hukuru. Makanaka Dawn nemwanakomana wake panguva yekunyora, ikozvino vanakidzwa nehupenyu hwakanaka kwazvo.
Tyrone Mings anomira naamai vake- Dawn Johnson
Kusvika pakuziva zvakawanda nezveTirone Mings Siblings: Mings hanzvadzi ndiCherrelle Mings, Iesha Mings uye mumwe uyo zvishoma inozivikanwa nezvake. Mukutenda hanzvadzi dzake, sezvavaimira paye panguva yese yekuedza, Mings akambotaura mumashoko ake “Ini handina kumbobvira ndanyatsoda shamwari dzichikura dzese nekuti ini ndine hanzvadzi dzangu". Senge panguva yekunyora, mumwe we hanzvadzi yake anonzi Cherrelle Mings iye zvino aine zita (Cherrelle Baram) akaroora.
Tyrone Mings inobvira pamwe nehanzvadzi dzake dzinodakadza- Cherrelle (kuruboshwe) naResha (kurudyi) avo vakatevera kutarisa kwaamai vavo .. Chikwereti: IG
Tyrone Mings Yevacheche Nyaya yeNhau uye Untold Biography Chokwadi - Lifestyle
Kusvika pakuziva Tyrone Mings Lifestyle kwaizokubatsira iwe kuti uwane mufananidzo wakazara weyekugara kwake. Kutanga kuenda, kunyangwe iwe uchigadzira mari yakawanda zvakaipa zvakafanira, Tyrone Mings haazvione iye achirarama hupenyu hwekunze hunotaridzika nyore nyore nemotokari dzinopenya uye dzimba. Anotyaira avhareji mota yemuridzi webhola, chiratidzo chinoratidza hupenyu hwekuzvininipisa.
Tyrone Mings anotyaira a average topbbbot's Car. Mufananidzo Wekodhi: IG
Tyrone Mings anoita mari yakaringana yaanodyara mubhizinesi rake, anoshandisa pane zvorudo uye zvakanyanya kukosha, imwe yaanoshandisa kurarama hupenyu hunonakidza kumakungwa akakurumbira anova kwaanofarira kuenda kuzororo. Pazasi payo pikicha yeMings inogoneka apo ichinakidzwa nechikepe chake kutasva.
Tyrone Mings 'Mararamiro- Anofarira kushandisa mari yake mumhenderekedzo yegungwa achinakidzwa nekufamba muchikepe. Mufananidzo Wekodhi: IG
Tyrone Mings Yevacheche Nyaya yeNhau uye Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Akambodzorera maFani akatenga hembe yake yekare: Pane imwe nguva mune 2014, Tyrone Mings akachinja nhamba yejasi rake kubva kuNo15 kuenda kuNo3 zvichitevera kuendeswa kwaAaron Cresswell kuenda kuWest Ham United. Kuita uku kwakauya nguva yadarika mushure mekunge maNo15 majee ake atotengwa nevamwe vevateveri vake. Waizviziva here? Mings aive nerupo zvekuti akapa kuti atenge mashati matsva evatsigiri aive atenga mahembe neyemakore 15 nhamba yake yakadhindwa kumusana.
Tyrone Mings- akarumbidzwa chiitiko chikuru mushure mekutsidzira kutenga mashati matsva evatsigiri aive nenhamba yake yechikwata chekare. Image Chikwereti- BBC kuburikidza neGENENN PARKER / TOM PULLEN.
Akambotsika-tsika muZlatan Ibrahimovic Musoro: Tyrone Mings akamboita zvisingafungi- izvo zvinonzi zviri kutsika musoro waZlatan Ibrahimovic, chiitiko chakamuona achitambidzwa mitambo mishanu. Nekuti aive "Zlatan", Zlatan haana kurwadziwa, uye mutambo wacho wakaenderera mberi nekutsiva mupfungwa dzake."
Tyrone Mings akambotsika-tsika paZlatan Ibrahimovics musoro. Chikwereti: Zuva
Kwangosara maminetsi mashoma mumutambo, Zlatan Ibrahimovic akatora mukana wekutsiva paMings. Panguva ino, iyo yekuSweden kurudyi yakamuburitsa panguva yekukona iyo yaaizviti ndiMings uyo asina rombo akamhanyira mugumbo rake.
Tyrone Mings naZlatan Ibrahimovic Feud. Image Chikwereti: TheGuardian
Kunyangwe iyo yakakoswa, yaive Tyrone Mings iyo yakagamuchira kurambidzwa kwenguva refu. Izvi zvinodaro nekuti stamping inoonekwa seyakaipisisa chiRungu FA mhosva. Pazasi pane chidimbu chevhidhiyo ufakazi hweMings netsaona akatsika musoro waAbrahamovic.
Tyrone Mings Yakagadzika Tattoo Chokwadi: Tyrone Mings ' muviri wake unoona muviri wake sehuku yake. Ane ma tattoos anoumbwa neako ega akasarudzika dhizaini anoratidza 'ziso, wachi neyevana' zviratidzo izvo zvinotakura mavara ezviitiko zvake panguva yehucheche.
Dzvinyu Mings Tatoo. Mufananidzo Chikwereti: JasonPixs uye Instagram
Tyrone Mings Nhabvu Academy: Tyrone Mings ane nhabvu yemitambo inonzi "Tyrone Mings Academy”Iyo inogara muBirmingham, England. Iyo academy inogamuchira vana (vese varume nevakadzi) vane makore ari pakati pe6 ne16. Kuva nedzidzo inzira yake yekudzosera munharaunda kuburikidza nekutengeserana kwake.
Iyo Tyrone Mings Academy. Image Chikwereti: TMA
Tyrone Mings Yevacheche Nyaya yeNhau uye Untold Biography Chokwadi - Video Summary
CHOKWADI CHINOGONA: Vongai nekuverenga kwedu Tyrone Mings Yevacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.